MMEMME MAKA ỊMEPỤTA KALENDA - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Mmemme maka ịmepụta kalenda
Usoro ịmepụta kalenda na-adị mfe ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwanrọ pụrụ iche. Mmemme dị otú ahụ na-enye ọtụtụ atụmatụ na ngwaọrụ maka ịmepụta ọrụ ndị dị otú ahụ. Ka anyị leba ụfọdụ n'ime ndị nnọchiteanya kachasị anya anya.
Usoro a na-enye ndị ọrụ otu ndebiri na ngwaọrụ dị iche iche nke ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na ọrụ dị elu. O nwere ihe niile na - abịa - ọtụtụ kalenda, na - agbakwunye ihe oyiyi na ederede, na - edezi ibe ọ bụla iche, na - eme ememe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
A na-ekesa TKexe Kalender n'efu ma dị maka nbudata site na saịtị ọrụ. Tụkwasị na nke a, ndị ọrụ nwere ike ịchọta ebe ahụ na ndebiri ọzọ, na ụdị ngwá ọrụ niile na-amasị ndị mmepe.
Iji ngwanrọ a, ị nwere ike ịnweta nnukwu nhọrọ nke blanks, nke a na-ahọrọ nke ọma na ngwaọrụ nke bara uru mgbe ị na-arụ ọrụ ahụ. Enwere ọnọdụ zuru ezu nke ọtụtụ ntinye, ọtụtụ kalenda, na ihe a nile na Russian, n'ihi ya, ọbụna onye ọrụ novice ga-aghọta ihe niile.
Iche iche, Achọrọ m ịhụ ọnụnọ nke cliparts. A na-edozi ha na ndabara ma dị na windo a họpụtara. N'ihi nkọwa ndị dị otú ahụ, ọ dị mfe ịmepụta ezigbo ọrụ magburu onwe ya.
Download Chepụta kalenda
Carlendar bụ usoro dị mfe. Enweghi ike ịrụ ọrụ ọzọ n'ime ya, site n'enyemaka nke ọrụ ndị mara mma. A na-ezubere ya maka ịmepụta kalenda. Naanị ihe na-enye onye ọrụ ọrụ - tinye ihe oyiyi maka ọnwa ọ bụla. Ya mere, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị lelee ndị nnọchiteanya ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche.
EZ Photo Kere kere
EZIOKWU Kalinda Kalinda bụ oke nhọrọ iji mepụta ọrụ pụrụ iche. A jikọtara interface dị mfe ma dị mfe na ngwaọrụ bara ụba na atụmatụ. A na-eme mgbanwe site na ọnwa site na taabụ, nke a na-adịghị ahụ anya n'ọtụtụ ndị nnọchianya yiri ya, ọ bụ ezie na ọ dị ezigbo mma. Na mgbakwunye, e nwere ọtụtụ ndebiri ndebanye na blanks.
N'ụzọ dị iche, Achọrọ m ịkọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke isiokwu ndị a kwadoro na nhazi ha n'efu. Nke a na-enye aka ịmepụta ihe zuru ezu, malite na ọrụ ndị a rụchaworị. A na-ekesa usoro a maka ego, mana enwere mbipụta ikpe, nke a na-ebudata maka n'efu ma na-ewebata ọrụ niile.
N'ebe a, ọkachamara ga-emepụta kalenda, na-enyere ndị ọrụ nyocha ọhụrụ aka. N'ikpeazụ, a ga-eji ọrụ ọkachamara a rụọ ọrụ niile, wee gbanwee nkọwa ahụ, n'ihi na ọ na-enyere aka ịgbakwunye ihe niile dị mkpa. Naanị ị ga-ahọrọ ihe ndị ahụ achọrọ ma jupụta n'ahịrị site n'ịgafe na windo, na njedebe ị ga-enweta nsonaazụ zuru ezu maka edezi na arụmọrụ.
Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọtụtụ nchịkọta fon maka aha ọnwa, izu, ụbọchị na aha, nke ga-enyere aka mee ka ọrụ ahụ bụrụ nke zuru oke ma mara mma. The interface dị kpam kpam na Russian ma mee ka ọ dị mfe maka ojiji.
Download Nanị kalenda
CoffeeCup Web Kalinda
Ihe dị iche n'etiti Kalinda nke Kalinda na ndị nnọchianya ndị ọzọ nke isiokwu a bụ na enwere ike iji usoro a ọ bụghị naanị dị ka kalenda, mana dị ka onye na-eme ihe na onye na-echetara ya. Onye ọrụ na-agbakwụnye mkpado na nkọwa ndị na-agbakwunye ụbọchị ọ bụla. N'ihi nke a, ọ ga-ekwe omume iji kalịnda ọ bụghị dịka nzube ya si dị. Ihe ọzọ nke Kalinda Kalịnda adịghị iche na ndị ọzọ, mana enweghi ọrụ iji gbakwunye ihe oyiyi, ma e nwere ọtụtụ isiokwu dịnụ.
Download Kọntaktị Kalịnda nke CoffeeCup
Hụkwa: Mepụta kalịnda site na gụchara foto na Photoshop
N'isiokwu a, anyị lere anya na ọtụtụ n'ime ihe omume kachasị ewu ewu na-enye gị ohere ịmepụta ihe omume pụrụ iche gị ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. Ha niile yiri nke a ma n'otu oge ahụ nwere ọrụ pụrụ iche, ekele nke ha na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, nhọrọ ahụ bụ nke gị, nke kachasị mma maka arụmọrụ, wee budata, gbalịa.